Robotierre: Qof dumar ah oo xoog leh ama nin dushiisa?
Aan la aqoonsan Philosophy
Noocaan nafsaddan ah ee haweeney ayaa noqotey mid ka sii horumara bulshada casri ah, halkaas oo haweenku bilaabaan inay ragga riixaan. Yaa leh ninkeeda "Robespierre": qof dumar ah oo xoog leh ama nin ku jira dharka?
Ka jawaabidda su'aasha ku saabsan cudurka maskaxda ee "Robespierre": haween xoog leh ama nin ku jira maro, ugu horreyntii waxay ku habboon tahay in la fiiriyo nooca haweenkaas. Waxay yihiin astaamaha dhabta ah iyo falanqeeyayaasha. Robespierre psychotype ma jecla dareenka aan loo baahnayn waligiisna jiidan, marwalba bulshada dhexdeeda. Xitaa muuqaal muuqaal leh, Robespierre waa haween aan rabin inay dhar gasho. Laakiin tani macnaheedu maaha in aysan garanaynin sida. Haddii gabadhu sharaxayso in ay kaliya u baahan tahay in ay daawato nafteeda, sababtoo ah haweeney xoog leh waa inay noqotaa mid jilicsan oo qurux badan, ka dibna waxay si toos ah u beddeli doontaa indhahayaga.
Wax kasta oo adduunka ah ee adduunka "Robespierre" loola dhaqmo si xun. Waxay aad u yaryihiin oo hoos ugu dhacaan dhulka. Waxaa sidoo kale loo yaqaan "falanqeeyayaasha". Haddii aad tahay gabar Robespierre ah, waa ku adag tahay in aad ku barato adiga, sababtoo ah ma jecla markii ragga aan aqooni ay bilaabeen inay kula hadlaan wadada. Noocaan noocan oo kale ah ee haweeney ah ayaa raadineysa amiir dhab ah oo aan rabin in ay beddesho waqtigeeda si ay u soocdo. Sidaa daraadeed, "Falanqeeyayaasha" waxay dareenka u hayaan kuwa kaliya ee si fiican u yaqaan. Dadka noocan oo kale ah waxaa ku jiri kara ardayda iyo saaxiibada kale. Laakiin xitaa iyaga ayuu ku helaa qalad badan oo aaminsan in qof kastaa u qalmo.
Haweeneyda "Robespierre" waxay qabtaa wax badan oo waa nooc sax ah. Sidaa darteed, aad bay u adag tahay in ragga ay ka dhex baxaan difaaca iyada oo ay weli ku guuleystaan ​​wadnaha. Dabcan, waxaad u maleyneysaa in nin dhab ah inuu muujiyo tayada ugu fiican oo waligiis iska daayo. Laakiin, nasiib daro, marmarka qaarkood marxaladda baadhitaanka dareenkiisa waa mid aad u dheeraaday, ninkuna ma arko wax dareen ah oo ku saabsan helitaanka ra'yigaaga. Sidaa darteed, xasuuso in gabadh xoogan ay wali xaq u leedahay in ay ahaato mid u qalqaal badan oo cafiya khaniisiinta.
Sida ay u caddaatay, awoodda gabadhani waa maskax falanqeyn ah. Sidaa daraadeed, gabadhu waxay noqon doontaa mid aad u fiican marka la qabsashada shaqada sayniska, dhaqaalaha iyo daabacaadda. Sababtoo ah dabeecaddiisa xasiloon iyo jacaylka laga qabo wax ay ku fekeraan, gabdhaha "Robespierre" waxay si fudud ugu shaqeeyaan shaqo dheer iyo mid shaqeynaya, kuwaas oo kuwa kalena aysan sabir u lahayn. Waxaa la ogyahay in ragga "falanqeeyaha" had iyo jeer iyo meel kasta ay doonayaan inay helaan caddaalad. Gabdhaha ku jira arrintani way xakameynayaan. Waxay haystaan ​​wax ku filan oo ay ugu yaraan heleen adeegyadooda. Hase yeeshe, haddii haweeneydani ay noqoto madax, shaqaaluhu had iyo jeer way u mahadsantahy inay u hogaansamaan dareenka, laakiin dareenka caddaaladda, sidaas awgeed marnaba uma dulqaadan doonto ama ciqaabi doonto cid kale. Intaa waxaa dheer, "Falanqeeyayaasha" waa kuwo aad u jeclaanaya erudite iyo kuwa hoosta kuqan leh kuwaas oo masuuliyad ahaan la xariirta shaqada.
"Analytics" ayaa marar dhif ah lagu arkay maraqa ama jilicsanaanta. Dumarka noocan oo kale ah ma arkaan dhibta. Ma rabto in ay dadka ku dhaadhiciso, sababtoo ah waxay ka jiraan adduunkan si fudud oo aan looga baahnayn. Gabadha "Robespierre" waa mid aad u adag in la jeclaado, maxaa yeelay waxay aragtaa dad badan oo khibrad badan leh. Sidaa darteed maxaa loo xirxiray timo qulqulaya oo ku socdo goos goos ah haddii guys weli aysan u qalmin? Adoo hogaaminaya qaanuunkan oo kale, "Falanqeeyayaasha" ayaa had iyo goor kali ah. Haddii aad fahamsan tahay inaad adigu tixraacayso maskaxdaasi, isku day inaad u noqotid daacadnimo. Uma baahnid inaad qof ku hayso fogaan bilo ah. Xasuuso in nolosha qoyska aysan ahayn iskaashi. Qof kasta oo doonaya caress iyo jacayl, oo aad, badanaa, in uu diido. Intaa waxaa dheer, si joogto ah ha isugu xirin naftaada. Haddii qof ku xumeeyo, waxaa wanaagsan inaad ka hadasho. Waxaa la ogyahay in haweenka "Robespierre" aysan si buuxda u furan kuwa xitaa ayagoo wada noolaa sanado badan. Dabcan, hal dhinac, waa mid aad u wanaagsan, sababtoo ah ninku ma dhibo dhibaatooyinka xaaskiisa. Laakiin, dhinaca kale, waxay u egtahay in gabar uusan ku kalsooneyn qeybteeda ama marwalba hubin inuusan waligiis ku caawin karin wax walba. Dabeecaddani waxay hoos u dhigeysaa sharafta bani-aadamka iyo dembiyada.
"Falanqeeyayaasha" waa gabdhaha jecel dareenka, dadaalka iyo anshaxa. Waxay ku soo dhawaadaan dadka degan, kuwa ragga ah ee jecel inay shaqeeyaan oo ay wax u gaaraan iyaga. Intaa waxaa dheer, ninkan "falanqeeye" waa in uusan aheyn mid aad u cakiran oo ku salaysan jinsi. Xaqiiqdu waxay tahay in naafanimada noocan oo kale ah ee haweenku aysan inta badan siin karin xannaanooyinka dumarka. Gabadha "Robespierre" kaliya ma aragto arrin badan. Waxay leedahay nolosheeda qiimaha kala duwan iyo mudnaanta, taas oo ay ku dhejiso meesha ugu horeysa. Dabcan, qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay fikradiisa, laakiin haddii aad aragto nin aad u jeclaanaya inuu la qabsado hargabka jinsiga ah, isku day inaad adigu ku adkaato. Xaqiiqdii, arrintan nolosheeda waxaa jira waxyaabo badan oo cusub oo xiiso leh, kaliya waxay u baahan yihiin inay bartaan inay bartaan ayna ka baqin. Dhamaadka, adiga kugu xiga waa qof ku dhashay hooyo, taas oo macnaheedu yahay in uu muddo dheer kasbaday kalsoonidaada. Sidaa darteed ha u xishoonin oo ha haysan wax cabsi ah. Baro inaad isku daydo oo aad tijaabiso. Tani waxay noloshaadu ka dhigeysaa kuwo midabo badan leh oo xiiso leh.
Haddii aad go'aansato inaad qayb ka noqotid, markaa fikradda ah "Analytics" ma ahan mid suurtogal ah in ay saameyn ku yeeshaan. Dumarka noocan ahi marnaba ma tixgeliyaan doodaha iyo rabitaanka nin ama ninka. Waxay u dhaqmaan sida ay u arkaan taam, mana arag wax waxyeello ah. Haddii lammaanaha guurka ah, oo ah haweeney ay tahay "Robespierre", waa inay wadaagaan hantida, ka dibna wax waliba way dhici karaan labadaba fadeexado, iyo si degan. Falanqeyn "Falanqeeye" ayaa noqon doona kiiska marka ninku hore u dhaqaajin doono hantida, si daacad ah u kasbaday. Haddii gabadhu ay ogaato in wax kasta oo ka mid ah ay ka mid yihiin wiilka, waligeed iskuma dayi doono inaad kala qaybiso wax walba kala badh oo ka tagto, iyada oo aruurisa waxyaallaheeda. Marka sidaas la sameeyo, falanqeeyuhu waxa uu hagayaa dareenkiisa caddaaladda. Si aan u dhicin oo aan loo eegin sida xiriirka uu u leeyahay horumarinta, "Robespierre" weligiis ma caayo iyo xadgudub ku ah qof aan shaki lahayn.
Maqnaanshaha "Hugo" - Dagaal-xumo ama ficil
Midabka baabuurka by shui fui
Kaarka Feng Shui
Maxay astaan ​​u tahay maroodiga shui fui?
Cilmi-baaris loogu talagalay bilawga: Bilowsashada Xikmadda ee Caalamka
Talisman kalluunka kalluunka by Feng shui
Miyuu nin u baahan yahay rumaysadka Ilaah?
Qaybaha dabiiciga ah
Sida loo doorto midabka midig ee dharka
Saameynta taariikhda qoyska ee nolosheena
Cutlets ka soo faras
Rolls avocado, salmon iyo qajaar
Calaamadaha xiisaha leh iyo naqshadaha dadka caanka ah
Pizza leh digaag iyo sausage
Nadiif nadiif ah qaabka Fly
Munaasabadaha loogu talagalay Sannadka Cusub 2017 ee loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn, shirkad yar oo farxad leh. Ciyaaraha ugu xiisaha badan iyo tartamayaasha sanadka cusub ee Roosterka ee xanaanada, dugsiga, guriga
Xaggee Loo Doorto?
Cuntada Malaa'igta laga soo xigtey Secret of Secret - jirka ah ee loogu talagalay 13 maalmood!
Maxay tahay inaad siiso awooweyaal fasaxyada sannadka cusub?
Nabaro iyo caafimaad
Sidee loo qariyaa sino
Sawirada qallafsan ee Timati
Guryaha bogsashada ee geedaha: isticmaalka, cuntooyinka, khatarta
Iyadoo lagu saleynayo tirakoobyada la heli karo ee ku saabsan korodhka dhalmada ee Wasaarada Caafimaadka iyo Horumarinta Bulshada ee Ruushku waxay rajeynayaan in rikoodh cusub oo dhalasho ah oo Russia ah sannadkan